GrapheneOS နှင့် Sailfish OS: Open Source Mobile Operating Systems | Linux မှ
GrapheneOS နှင့် Sailfish OS: Open Source Mobile Operating Systems
Linux Post Install လုပ်ပါ | 21/09/2021 06:00 | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ, အတော်ကြာ
ကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကမှမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည် မှစ၍ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Operating System ကိုခေါ် Ubuntu ကို Touch ကိုဒီနေ့ငါတို့နောက်ထပ်ခေါ်ဆိုမှု ၂ ခုကိုစူးစမ်းကြည့်မယ် "GrapheneOS" y Sailfish OS ကို.
"GrapheneOS" စီမံကိန်းတစ်ခုအနေနှင့်တီထွင်ခဲ့သည် open source ဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်မယူ၊ အာရုံစိုက်သည် privacy နှင့်လုံခြုံရေးနှင့် Android applications များနှင့်လိုက်ဖက်မှုတို့ပါဝင်သည်။ စဉ်တွင်, Sailfish OS ကို Finnish mobile phone company ဟုခေါ်သည် Jollaဒါပေမယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ခံတယ် open source ဖြစ်ပြီး တူ၏။ ၎င်းကိုလည်းအလေးပေးသည် လုံခြုံရေးနှင့်လိုက်ဖက်မှု Android app များနှင့်။
Fairphone + Ubuntu Touch: ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲသည် open source အတွက်ကျေးဇူးပြုသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ မိုဘိုင်း Operating Systems များဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်အောက်ပါလင့်ခ်တွေကိုသင်ကလစ်နိုင်ပါတယ်။
"Ubuntu Touch e၎င်းသည် open source software Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းသည် source code ကို သုံး၍ ၎င်းကိုပြောင်း၊ ဖြန့်ဖြူးနိုင်၊ ကူးယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် backdoor software ကို install လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် cloud ကိုမမှီခိုပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏ဒေတာများကိုထုတ်ယူနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပရိုဂရမ်များလုံးဝမရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် laptop အားလုံး / desktop များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတို့အကြား Convergence ၏ရည်မှန်းချက်ကိုလုံးလုံးစုစည်းထားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုရရှိစေရန်အာရုံစိုက်သည်။ Ubuntu Touch သည် minimalism နှင့် hardware efficiency ကိုအဓိကထားသည်။" Fairphone + Ubuntu Touch: ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲသည် open source အတွက်ကျေးဇူးပြုသည်
Google နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲ Android: အခမဲ့ Android! ငါတို့မှာဘာရွေးချယ်စရာတွေရှိသလဲ။
Android - Mobile Operating System ကိုသုံးရန် Application များ
Ubuntu Touch OTA 18 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
1 GrapheneOS နှင့် Sailfish OS: စိတ်ဝင်စားဖွယ် Android အခြားနည်းလမ်းများ
1.1 GrapheneOS ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Sailfish OS ဆိုတာဘာလဲ။
GrapheneOS နှင့် Sailfish OS: စိတ်ဝင်စားဖွယ် Android အခြားနည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "GrapheneOS" ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"GrapheneOS သည်အကျိုးအမြတ်မယူသော open source ပရောဂျက်တစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ထားသော Android application များနှင့်လိုက်ဖက်သော privacy နှင့်လုံခြုံရေးအာရုံစိုက် mobile operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် sandboxing ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခြင်း၊ လျော့ပါးစေခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းပုံစံတို့အပါအ ၀ င် privacy နှင့်လုံခြုံရေးနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။"
ထို့ကြောင့်၎င်း၏အကြား ထူးခြားသောလက္ခဏာများ ယေဘူယျအားဖြင့်
"Operating System ၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုအခြေခံ မှစ၍ တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အားနည်းချက်အုပ်စုအားလုံးကိုလျော့ချရန်နှင့်အားနည်းချက်အဖြစ်များဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချရန်သိသိသာသာခက်ခဲစေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Operating System နှင့်၎င်းတွင်သုံးသောအပလီကေးရှင်းနှစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကွန်ယက်ခွင့်ပြုချက်၊ အာရုံခံခွင့်ပြုချက်၊ ကိရိယာပိတ်ထားသောအခါကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များအတွက်ခလုတ်များစွာကိုထည့်သွင်းသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် UX ပါ ၀ င်သောသုံးစွဲသူများအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ။" သတင်းအချက်အလက်ချဲ့ထွင်ရန်
Sailfish OS ဆိုတာဘာလဲ။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Sailfish OS" ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"Sailfish OS သည်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်သုံးရန် optimized ပြုလုပ်ထားသောလုံခြုံသောမိုဘိုင်း Operating System တစ်ခုဖြစ်ပြီး embedded devices များနှင့်အသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်မည်သည့်ဆက်စပ်မှုမှမပါဘဲတစ်ခုတည်းသောလွတ်လပ်သောမိုဘိုင်း operating system ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည်တက်ကြွသော open source ပံ့ပိုးမှုပုံစံပါ ၀ င်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။"
သူ့အကြား ထူးခြားသောလက္ခဏာများ အောက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ပါသည်
"၎င်းကိုဂန္ထဝင် Linux ဖြန့်ချီမှုကဲ့သို့တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်း၏အထင်ကရ user interface ကို Qt framework မှပံ့ပိုးပေးသောအစွမ်းထက် user experience design language QML ကို အသုံးပြု၍ တီထွင်ခဲ့သည်။ QML ၏ဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂါရပ်များသည် Sailfish OS အားသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသော၊ ထိတွေ့နိုင်သော UI များနှင့်ပေါ့ပါးသော application များဖန်တီးပေးနိုင်ရန် UI ဒြပ်ပေါင်းများကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် UI အဆောက်အအုံလုပ်ကွက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သော native applications များဖြစ်သော Sailfish Silica ဟုခေါ်သောနည်းပညာတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။" သတင်းအချက်အလက်ချဲ့ထွင်ရန်
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Operating Systems "GrapheneOS" y Sailfish OS ကိုအခြား open source များစွာနှင့်အတူ Android ကိုအောင်မြင်စွာအစားထိုးနိုင်ရန်စူးစမ်းရန်စိတ်ဝင်စားစရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်ဘာကြောင့်သုံးတာလဲ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောမိုဘိုင်း Operating System များကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများ (သို့) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေသည် privacy, အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » GrapheneOS နှင့် Sailfish OS: Open Source Mobile Operating Systems
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကမင်း Sailfish OS ကနေ Flatpak ကိုသုံးနိုင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ Logan မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
NVIDIA 470.74 သည် Linux 5.14 Support၊ Bug Fixes နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်